နောက်ခံမူးလာအသံလေးနဲ့အိုက်တင်ပေါင်းစုံသုံးကာ မျက်နှာပြောင်နေတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုအသစ်လေး – ျမန္မာသတင္းစံု
နောက်ခံမူးလာအသံလေးနဲ့အိုက်တင်ပေါင်းစုံသုံးကာ မျက်နှာပြောင်နေတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုအသစ်လေး
MRTV-4ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားမွာ က်ရာဇာတ္ရုပ္အတိုင္း ကာရိုက္တာတိုင္းကို ပီျပင္ေအာင္ သရုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ျခဴးေလးကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရင္းနွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္.။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ျခဴးေလးကေတာ့ ဇာတ္ရုပ္တိုင္းကို ပီျပင္ေအာင္သရုပ္ေဆာင္နိုင္သလို Tik Tok ေဆာ့ရာမွာလည္း Tik Tok ဘုရင္မေလး လို႕ တင္စားေခၚေဝၚၾကတဲ့အထိကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္နဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္တတ္သူေလးတစ္ဦးလို႕ ေျပာရင္မွားမယ္မထင္ပါဘူး..။ သူမနဲ႕ ဆံုတဲ့ အနုပညာရွင္တိုင္းနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ Tik Tok ေလးေတြေဆာ့ကာ မေဆာ့တတ္တဲ့ အနုပညာရွင္ေတြကိုေတာင္ Tik Tok ပိုးေလးဝင္ေအာင္ လုပ္တတ္သူေလးပါ..။
ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားနဲ႕ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို မအားမလပ္နိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျခဴးေလးက သူမရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ မအားတဲ့ၾကား ဟာသTik Tok ဗီဒီယုိေလးေတြကို သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ေလ့ရွိသူပါ..။ ဒီေန႕ မတ္လ (၁၇)ရက္ေန႕မွာေတာ့ “ေက အသစ္နဲ႔ အရမ္းေခ်ာတဲ့ ျခဴးလာ တစ္ေယာက္ မင္းတို႔ေဘးမွာ ရွိေနလို႔ ဘာမွအားမငယ္ပါနဲ႔… စခြီ စခြမ္ ေတြ မွန္သမွ် ျခဳးေလးTiktok ထဲေရာက္…. ဒါဘဲ….”ဆုိၿပီး ဟာသTik Tok ဗီဒီယုိအသစ္ေလးကို သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္..။
ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြရဲ႕အသည္းေက်ာ္ မူးလာရဲ႕ အသံနဲ႕ အိုက္တင္ေပါင္းစံုသံုးကာ မ်က္နွာေျပာင္ေနတဲ့ ျခဴးေလးကေတာ့ ဟာသဆန္ေနေပမယ့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့ သူေလးပါပဲေနာ္ ပရိသတ္ႀကီး..။ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအတြက္လည္း ျခဴးေလးရဲ႕ ျခဴးလာဟာသ Tik Tok ဗီဒီယုိဖိုင္ေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္..။
Source: Chue Chue’s Facebook
“နောက်ခံမူးလာအသံလေးနဲ့အိုက်တင်ပေါင်းစုံသုံးကာ မျက်နှာပြောင်နေတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုအသစ်လေး”
MRTV-4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်အတိုင်း ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်.။ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ခြူးလေးကတော့ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို Tik Tok ဆော့ရာမှာလည်း Tik Tok ဘုရင်မလေး လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အထိကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲပျော်ရွှင်အောင် လုပ်တတ်သူလေးတစ်ဦးလို့ ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး..။ သူမနဲ့ ဆုံတဲ့ အနုပညာရှင်တိုင်းနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ Tik Tok လေးတွေဆော့ကာ မဆော့တတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကိုတောင် Tik Tok ပိုးလေးဝင်အောင် လုပ်တတ်သူလေးပါ..။
ဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့ ကြော်ငြာများကို မအားမလပ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ခြူးလေးက သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် မအားတဲ့ကြား ဟာသTik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိသူပါ..။ ဒီနေ့ မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့မှာတော့ “ကေ အသစ်နဲ့ အရမ်းချောတဲ့ ခြူးလာ တစ်ယောက် မင်းတို့ဘေးမှာ ရှိနေလို့ ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့… စခွီ စခွမ် တွေ မှန်သမျှ ခြုးလေးTiktok ထဲရောက်…. ဒါဘဲ….”ဆိုပြီး ဟာသTik Tok ဗီဒီယိုအသစ်လေးကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် မူးလာရဲ့ အသံနဲ့ အိုက်တင်ပေါင်းစုံသုံးကာ မျက်နှာပြောင်နေတဲ့ ခြူးလေးကတော့ ဟာသဆန်နေပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းအောင် လုပ်တတ်တဲ့ သူလေးပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ခြူးလေးရဲ့ ခြူးလာဟာသ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Previous Previous post: အိုက်တင်အမူအရာလေးတွေနဲ့ အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အခွီဗီဒီယိုဖိုင်လေး
Next Next post: ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရ သွေးထွက်ခေါင်းမူးဖြစ်နေစဉ် ကွမ်းယာသည် ဘာသာခြားတဦးမှ လူသားဆန်တဲ့လုပ်ရပ်